Walindhaa Faayila Barruu
Qindaa'inoota kuusdeetaa dhangii barruun olgalchan ifteessa.
Dhangii barruu kuusdeetaa keessatti, deetaan kan kuufamu faayilii ASCII kan dhangoofne keessattii, iddoo galmeen tarree of keessatti qabuu dha.Dirreewwan deetaa kan adda hiraman gargareessaadhan. Barruun dirree deetaa keessa jiru kan hiramu mallattoo waraabbiitin.
Xurree gara faayiloota barruutti
Xurree gara barruu faayilii ykn faayilootaatti galchi. Yoo faayilii barruu tokko barbaadde, fufaa maqaa faayilaa kamiyyuu fayyadamuu dandeessa. Yoo maqaa ukaankaa galchite, faayilli barruu ukaankaa kana keessa jiru fufaa *.csv jedhu faayilii kuusdeetaa barruu mirkaneessuuf qabaachuu qaba.
qaaqa faayila filame banuuf cuqaasi.
faayilii barquu (*.txt)
Faayiloota txt argachuuf cuqaasi.
faayilii 'qoodduun gatii adda baasa' (*.csv)
Faayiloota csc argachuuf cuqaasi.
Gahiinsa maamiloo faayiloota cuqaasi. Saanduqa tarree keessatti itti fufaa galchi.
Adda baaftuu dirree
Adda baaftuu barruu
Adda baaftuu deesimaalii
Adda baaftuu kumaatamaa
Title is: Walindhaa Faayila Barruu